Faah-faahin:-Al-shaabab oo Weerar Ku Qaaday Deegaanka Baar-sanguuni – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Faah-faahin:-Al-shaabab oo Weerar Ku Qaaday Deegaanka Baar-sanguuni
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar khasaara dhaliyay oo markale lagu qaaday saldhig ciidamada maamulka Jubba-land ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo.
Al-shabaab ayaa sheegay inay mar kale weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaadeen deegaanka Baarka Sanguuni oo qiyaastii 45KM ujira magaalada Kismaayo wxayna sheegen in weerarkaasi ay ku dileen afar Askari.
Al-shabaab ayaa sheegay in daqiiqado kadib markii duqeyntu dhacday ayay ciidamada Al Shabaab weerar fool ka fool ah ku qaadeen deegaanka waxaana halkaas ka dhacay dagaal muddo daqiiqada ah socday sida ay Al-shabaab baahisay.
Taliyaha ciidanka daraawiishta qeybta howlgalinta Jublland iimaan Axmed Bashiir oo la hadlay idaacada Simba ee Magaaladda Muqdisho ayaa sheegay inay jiraan weeraradaasi balse aysan jirin wax khasaaro ah hadana ay ciidankooda joogaan oo ay gacanta ku hayaan Baarsanguuni iyo Tooliyin kale nabadgalyadeedana ay hada xasiloontahay.
8-dii bishan ayaa weerar ka dhacay baarsanguuni lagu dilay Askari Ameerikaan ahaa dagaal culus ayaa ka dhacay aaggaas, iyadoo la sheegay in khasaare xoog leh uu ka dhashay.